राजपा र फोरमलाई ओलीसंग मिल्न बाध्य पार्ने बिशेष ८ कारणहरु यस्तो छन् ! « Pana Khabar
राजपा र फोरमलाई ओलीसंग मिल्न बाध्य पार्ने बिशेष ८ कारणहरु यस्तो छन् !
ओली पाँच वर्ष विना अवरोध सरकार चलाउन चाहन्छन्। तर, सत्ताबाट बाहिरिएको कांग्रेसले उनलाई पाइला–पाइलामा अवरोध गर्नेछ। प्रतिनिधि सभामा एमाले–माओवादी केन्द्र दुई तिहाई नजिक त छन्। तर, कांग्रेस पनि कमजोर छैन। लोकप्रिय मत एमालेकै हाराहारीमा पाएको छ उसले। मधेश केन्द्रित दलहरुलाई पनि साथ लियो भने प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको प्रस्तुति अरु शक्तिशाली हुन्छ।